प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहमतीका लागि असफल, प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाद्वारा अस्वीकार (के हुँदैछ संविधानसभामा अपडेट....
गृहपृष्ठ » राजनीति » प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहमतीका लागि असफल, प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाद्वारा अस्वीकार (के हुँदैछ संविधानसभामा अपडेट….
प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहमतीका लागि असफल, प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाद्वारा अस्वीकार (के हुँदैछ संविधानसभामा अपडेट….
संविधानमा अन्तरवस्तुमा सहमतीको मन्त्र जपिरहेका प्रमुख दलका शीर्ष माघ ८ गतेभित्र मस्यौदा जारी गर्ने नसक्ने गरी असफल भएका छन् ।
आइतबार सहमतिको नजिक पुगेर छुटेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु अन्ततः सोमबार दिनभरिको वार्तापछि बिना सहमति छुट्टिए ।
जसले युवा सभासद्हरुलाई आक्रोशित बनायो । दिँउसो १ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक बोलाएर असहमतीकै लागि बन्द कोठामा सहमतीको मन्त्र जपिरहेका शीर्ष नेताहरु प्रति युवा सभासदहरुले आक्रो व्यक्त गरे ।
समय हर्किरहदाँ समेत नेताहरु सहमतीको बिन्दुमा नपुग्दा कांग्रेस एमाले लगायतका दलमा आवद्ध ५० जनाभन्दा बढी सभासदहरुले शीर्ष बैठकस्थलमै होहल्ला गरेपछि उनीहरुलाई थामथुम पार्ने प्रयास एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैंले गर्नुप¥यो ।
एमालेका प्रकाश ज्वाला, यज्ञराज सुनुवार, रेवती भण्डारी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, लगायतका सभासदहरुको हुल शीर्ष बैठक कक्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि बैठकमा सहभागी दल नेताहरु अब सहमतीको आधार नरहेको भन्दै बैठक स्थल बाहिरीएका थिए ।
बैठकबाट निस्किएका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सहमति नभएकाले अब द्वन्द्धको शुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सहमतिका लागि दुई दिन समय मागेको तर, सत्तारूढ दलहरूले अस्वीकार गरेकाले अब मुटभेट हुने प्रतिक्रिया दिए ।
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले कुनै पनि विकल्पमा जान नमानेपछि अब सहमतिको प्रयास असफल भएको एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सभासदहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्षले दलहरुबीच सहमति नभएपछि अब संविधान, संविधानसभा नियमावली र स्थापित मान्यता अनुरुप आफू अघि बढ्ने जानकारी गराएका छन् ।
बैठक असहमतिका बीच टुंगिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले साँझ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाए ।
नेम्वाङले दलका नेताहरुलाई ‘तपाईहरु असफल हुनुभयो, अब म नियम, संविधान र स्थापित अभ्यासअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउँछु’ भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेम्वाङले यसअघि नै आफूलाई घेराउ गर्न आएका सभासदहरुलाई सहमति नभएमा राति नै संविधानसभा बैठक राखेर प्रश्नावली विशेष समितिका लागि प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका थिए ।
अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभा बैठक राति ८ बजेसम्म पनि नबसेपछि सभासदहरु आक्रोशित बनेका थिए ।
माघको जाडोमा संविधानसभा भवन परिसरमा बैठक पर्खेर बसेका सभासदहरुले शीर्ष नेताहरुको बैठक चलिरहेको शंकर हलमा प्रवेश गरेर सहमतिका नाममा तमासा मात्र नदेखाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रश्नावली विशेष समिति बनाउने प्रस्ताव एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले अस्वीकार ग¥यो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन समिति गठनको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
संविधान सभाको बैठकमा अब प्रक्रियामा जाने भन्दै पेश गरिएको उक्त प्रस्ताव एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक असफल भएपछि कार्यव्यवस्था बैठक बोलाइएको थियो ।